Nin Weeraray Macbad Yuhuudu Ku leedahay Maraykanka. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Nin Weeraray Macbad Yuhuudu Ku leedahay Maraykanka.
Nin Weeraray Macbad Yuhuudu Ku leedahay Maraykanka.
April 28, 2019 - By: HORSEED STAFF
Wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah ayaa loo xiray weerar ka dhacay macbad ay yuhuudu ku cibaadaystaan oo ku yaala Magaalada San Diego ee gobolka California ee dalka Maraykanka. Weerarkaasi waxaa ku dhimatay Haweenay, saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Ninka loo qabtay weerarka oo lagu magacaabo John Earnest ayaa weerarka gaystay xili uu dabaal deg ka socday xarunta yuhuudu ku cibaadaystaan. Booliisku kama hadlin sababta keentay weerarkan, hase yeeshee madaxweynaha Maraykanka oo weerarka cambaareeyay ayaa ku tilmaamay falkaasi mid yuhuud nacayb ah.
Weerarkan ayaa ah kii labaad muddo lix bilood ah lagu qaado xarumaha ay ku cibaadaystaan Yuhuudu. Bishii October ee sanadkii hore ayaa rasaas ka dhacday Macbad ku yaal Pittsburg waxaa ku dhintay 11 qof oo yuhuud ah.
Taliyaha booliiska magaaladda San Diego Sheriif Bill Gore ayaa suxufiyiinta u sheegay inay baaarayaashu ay dib-u-eegayaan boggaga baraha bulshada ee uu isticmaali jiray ninkan la tuhusan yahay. barahaasi ayaa lagu daabacay qoraalo Yuhuud Nacayb ah.
Dhinaca kale, Maamulku waxay sheegeen in sidoo kale ay jiraan baaritaano kale oo la xiriira Eedaymo kale oo loo haysto Ninkan oo ah Masaajid dab la qabad siiyay bishii hore ee March.